Kacdoon ka dhashay Sheekh Caan ah oo lagu Diley Wanlaweyn, Tirada Dadka kale iyo Wararkii u Dambeeyey | Aftahan News
Kacdoon ka dhashay Sheekh Caan ah oo lagu Diley Wanlaweyn, Tirada Dadka kale iyo Wararkii u Dambeeyey
Wanlaweyn(Aftahannews):- Xiisad ayaa wali ka taagan degmada Wanlaweyn tan iyo shalay oo Salaado ahaydna waxaa magaalada ka dhacay dibad baxyo lagaga soo horjeedo dil habeenhore halkaa loo gaystay sheekh caan ka ahaa Wanlaweyn oo lagu magacaabi jiray Macallin Nuur Cismaan Bilaal.
CIIDANKA DANAB EE DAWLADDA SOOMAALIYA OO WANLAWEYN SHEEKH KU DILAY 2018
Xaaji Yuusuf Caddow Buulle oo ah Afhayeenka odayaasha dhaqanka ee degmada Wanlaweyn oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in askar ka tirsan ciidanka Danab ee fadhigoodu yahay saldhiga Ballidoogle ay weerareen labo guri oo uu macallinka ku lahaa degmada Wanlaweyn.
Ciidanka Danab oo qirtay dilka Sheekha;
Dilal soo noqnoqday;
Baaq uu u diray Dowladda dhexe;
Dadkii dilalka noocan ah loo geystay;
Shukri Maxamed oo la dilay 14-kii bishii Julay
Nuur Xaaji Guhaad oo la dilay 30-kii bishii Julay